Xaaji_Saalax, 9 Mar 2014(Alldhooftinle.com)
Duqa ama maayarka magaalada Jakarta ee dalka Indooniisiya ayaa soo saaray wareegto lagu mamnuucayo in daayeero lagu shaqaysto magaalada Jakarta. Dad fara badan ayaa nolol maalmeedkooda ka soo saarta daayeeradda oo lagu daawado faras magaalaha Jakarta.
Duqa Magaaladaas oo la yiraahdo Joko Widodo ayaa sheegay inaan daayeer danbe loo ogoleyn in wadada lagu ciyaarsiiyo si loo daawado. Sababta mamnuucida ayuu ku tilmaamay inay ugu weyn tahay dhinaca caafimaadka ka dib markii qaar ka mid ah daayeerada laga heley xanuuno qatar ah. Wuxuu kaloo sheegay in dadka ku shaqaysta daayeerada ay si xun ula dhaqmaan markay tababarayaan iyo markay ciyaarsiinayaan taasoo ah xadgudub loo geysanayo xayawaan.
Dadka u ololeeya xuquuqda xayawaanka ayaa mudooyinkii u danbeeyey ku dadaalayey in la joojiyo dadka ku shaqaysta dayeerada. Waxay sheegeen in xayawaankaas 12 saacadood marmarka qaar lagu shaqaysanayo dhowr qofna isu bedelaan isagoo aan cunto iyo biyo midna la siin, waxayna guul ku tilmaameen go'aanka lagu joojinayo arintaas.
Laakiin dadku kuma wada faraxsana go'aankaa, haweeney la yiraahdo Sarinah oo leh 13 daayeer waxay sheegtay inay ku kireyso daayeerkiiba sadex doolar maalintii. Waxay sheegtay in dadka ka kireystaa ay wadooyinka ku ciyaarsiiyaan isla markaana ka helaan wixii alaah uga qoro maalintaa. Ma lihi ayay tiri meel kale oo lacag iga soo gasho oo aan ahayn dayeerada, waxaana haystaa caruur yaryar ma garanayo waxaan sameeyo ayay ku soo koobtay hadalkeedii.
Magaalada Jakarta waxaa aad looga yaqaanaa daawashada daayeerada kuwaas oo wadada dhinaceeda lagu daawado qof kastoo daawanaya waa inuu lacag yar bixiyaa. Bariga magaalada Jakarta ayaa caan ku ah daayeerada waxaana loo yaqaanaa Monkey Village.